मुख्य पृष्ठ » लघुकथा » प्रश्न
१८ मे, २०१७ लेखक : मदन पौडेल
भाइकाजी चोक को पसल बाट केही किनेर फर्किंदैं थिए । "बाजे झोला म बोकिदिउँ?" को आवाज ले फरक्क फर्किए । आँफूले नचिनेको केटो । "मैले त चिनिन नि बाबु, कसको छोरा?" "हजुर ले चिन्नुहुन्न, म उ त्यो पहेंलो घर मा काम गर्न बसेको १ महिना भयो। "ए दिनेश बाबु को घर मा?" "हो।"
"मैले हजुर लाई कौसी मा सधैं देख्छु, परेवा लाई खाना दिंदा । मेरो घर मा पनि थुप्रै परेवा आउँछन्, आमा ले हामी लाई परेवा आयो भने धपा भन्नुहुन्छ, नत्र त सबै खाईदिन्छ । हजुर चाँहिं बोलाई बोलाई खुवाउनुहुन्छ। " कुरा गर्दै उनीहरू घर पुगे।
ठूलो घर, बैठक कोठा को भित्ता मा परिवार को फोटाहरु सजिएको । फोटो हेरेरै निकै सम्पन्न भन्ने बुझिन्थ्यो। "हजुर एक्लै बस्नुहुन्छ? छोराछोरीहरु खै त?" "उनीहरू बिदेश मा बस्छन्। उतै पढ्छन्, काम गर्छन्।" केटो ले प्रश्न गर्यो, "ए म जस्तै?" भाईकाजी एकैछिन टोलाए अनि "हो" भने ।
"म हजुर को लागि चिया पकाईदिउँ ? मिठो पकाउँछु।"
"कसले सिकायो चिया पकाउन?""एहाँ आउने कुरा भएपछि आमा ले सबै पकाउन सिकाउनु भयो।"
"तेरो घर मा काम होला, भैगो जा, अहिले म आफैं पकाउँला।"
"अहिले घर मा कोहि छैन, दाई भाउजु ६ बजेपछि मात्र आउनु हुन्छ, म एतिबेला स्कूल बाट फर्केपछि एकछिन एक्लै हुन्छु।"
"ल त पका तँलाई र मलाई।"कौसी मा बसेर गफ गर्दै दुबैजना चिया पिउन थाले ।
"हाम्रो बा ले त झुट बोल्नु भको रैछ।" केटोले सानो आवाज ले भन्यो । "के झुट बोल्यो तेरो बा ले?" "मलाई घर छोडेर आउन मन थिएन । जान्न भनेर रोएँ, हामी गरीब ले एसो गर्छु उसो गर्दिन भन्न कहाँ पाईन्छ र बाबु, आफूसंग पैसा भए किन परिवार संग छुट्याएर अरुको ठाउँ मा पठाउँथें भन्दै संझाउनु भयो।" केटो ले अँध्यारो अनुहार लगाउँदै भन्यो।
"बाजे! हजुर त गरीब हुनुहुन्न, धेरै पैसा छ, के भनेर संझाउनु भयो त आफ्ना छोराछोरी लाई ?" केटो ले कौतूहलता का साथ सोध्यो।भाइकाजी केटा को अप्रत्याशित प्रश्न को उत्तर भेट्टाई रहेका थिएनन् ।